Indabuko Yakho » Category » Umlando ngezibongo
In M, Umlando ngezibongo / by Bongukholo Khumalo / on May 13, 2022 / No Comments
Umlando ngesibongo sakwaMachi *Kuloba uMthokozisi Fabase Dlomo* AbakwaMachi kusengabantu bakwaXolo njengoba bezalwa umuntu munye uMsuthu kaNtamonde kaSabela kaHenge. Lezizwe sizithola sezisendaweni yaseMatatiela esiDumbini zibuswa inkosi Sabelo zidabuka eLusotho. Sekubusa inkosi Ntamonde kwab... qhubeka ufunde »
In N, Umlando ngezibongo / by Bongukholo Khumalo / on May 12, 2022 / No Comments
Umlando ngesibongo sakwaNsele Abantu bakwaNsele bangaBambo Nguni ngokwezigaba zabaNguni. Laba bantu bakwaNsele babuye baziwe ngokuthi bangabaseMangweni, basekanye nabantu bakwaZwane , abakwaHudla, abakwaCebekhulu , abakwaNdiweni kanye nabanye. UNsele okwaqanjwa ngaye isibongo nguNsele wesibili indod... qhubeka ufunde »
In M, Umlando ngezibongo / by Bongukholo Khumalo / on May 4, 2022 / 2 Comments
Umlando ngesibongo sakwaMathonsi ****Lo mlando ucashunwe encwadini ka Senzo Maswidi Mbatha esihloko sithi ‘Ziphuma eguleni’ Abantu bakwaMathonsi baphuma kubantu bakwaMthembu ,kanti kubona kuphuma abantu bakwaMadondo. Baphuma kuBaThembu abangoMvelase, abayindlu encane yaBaThembu. AbakwaMv... qhubeka ufunde »
In K, Umlando ngezibongo / by Bongukholo Khumalo / on April 15, 2022 / No Comments
Umlando ngesibongo sakwaKhanyile ***Kuloba INtungwa lasenhla kwaSokhumalo*** (Lo mlando ucashunwe encwadini ka Solwazi J Maphalala esihloko sithi ‘Izibongo zamakhosi akwaZulu uMqulu 3) Abantu bakwaKhanyile bawuzalo lwenkosi uMalandela njengabantu bakwaQwabe, abakwaZulu, abakwaSibiya, abakwaGaz... qhubeka ufunde »
In M, Umlando ngezibongo / by Bongukholo Khumalo / on April 12, 2022 / No Comments
Umlando ngesibongo sakwaMncwabe Kuloba iNtungwa lasenhla kwaSokhumalo *Lo mlando ucashunwe encwadini ka Senzo Maswidi Mbatha esihloko sithi’Ziphuma eguleni’* Abantu bakwaMncwabe sibathola endulo bezinze ngasoThukela endaweni eyaziwa ngokuthi kuseMpofana. BangaBambo Nguni ngokwezigaba zab... qhubeka ufunde »
In M, Umlando ngezibongo / by Bongukholo Khumalo / on April 9, 2022 / No Comments
Umlando ngesibongo sakwaMpontshane Kuloba iNtungwa lasenhla kwaSokhumalo Lo mlando ucashunwe encwadini ka Senzo Maswidi Mbatha ethi ‘Ziphuma eguleni’ Abantu bakwaMpontshane kusengabantu bakwaButhelezi, baphuma kuJeqe Buthelezi owabe eyiNsila yeSilo uShaka . Ngenkathi uJeqe eyiNsila lapha... qhubeka ufunde »
In N, Umlando ngezibongo / by Bongukholo Khumalo / on April 9, 2022 / No Comments
Umlando ngesibongo sakwaNjilo Kuloba iNtungwa lasenhla kwaSokhumalo *Lo mlando ucashunwe encwadini ka Senzo Maswidi Mbatha esihloko sithi ‘Ziphuma eguleni’ Abantu bakwaNjilo bangamaDebe Nguni ngokwezigaba zabaNguni. Endulo sibathola bakhe ngasemfuleni uMlaza , kodwa ngenxa yezimpi ezazid... qhubeka ufunde »
Umlando ngesibongo sakwaNzimande *Kuloba iNtungwa lasenhla kwaSokhumalo* Imvelaphi yabantu bakwaNzimande iseSwazini .Laba bantu bakwaNzimande bangaBambo Nguni ngokwezigaba zabaNguni. AbakwaNzimande baphuma ebukhosini baseSwazini, baphuma kuNdzimandze owabe engenye yamadodana enkosi uDlamini, elamana... qhubeka ufunde »
In M, Umlando ngezibongo / by Bongukholo Khumalo / on April 3, 2022 / No Comments
Umlando ngesibongo sakwaMkhulise Kuloba INtungwa lasenhla kwaSokhumalo(Bongani Kholo Khumalo) Abantu bakwaMkhulise baphuma kuBaThembu bakwaMvelase , ababeholwa yinkosi uNgoza ka Mkhubukeli ngesikhathi seSilo uShaka. AbakwaMvelase bayindlu encane yaBaThembu, indlu enkulu yilena ezibiza ngokuthi ingey... qhubeka ufunde »